Barcelona oo ku garaacday kooxda Inter Milan garoonkeeda Camp Nou… +SAWIRRO – Gool FM
Barcelona oo ku garaacday kooxda Inter Milan garoonkeeda Camp Nou… +SAWIRRO
(Barcelona) 02 Oct 2019. Kooxda kubaddac cagta Barcelona ayaa guul muhiim ah kaga gaartay naadiga Inter Milan garoonka Camp Nou, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, kulankooda 2-aad GROUP F ee tartanka Champions League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hogaamineysay kooxda martida ku aheyd garoonka Camp Noue ee Inter Milan.
Daqiiqadii 3-aad ee bilawga qeybta hore ciyaarta Inter Milan ayaa hogaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay xiddiga reer Argantina ee Lautaro Martinez.
Daqiiqadii 58-aad Luis Suarez ayaa ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah, kaddib markii uu caawinta goolkan uu ka helay saaxiibkiis Arturo Vidal.
85 daqiiqo markale Luis Suarez ayaa gaaray shabaqa kooxda Inter Milan, wuxuuna hogaanka u dhiibay Barcelona, isagoo dheesha ka dhigay 2-1,iyadoo uu goolkan si qurux badan kaga caawiyay saaxiibkiis Lionel Messi.
Ugu dambeyntii dheesha ayaa ku soo dhamaatay 2-1 ay guusha kaga gaartay Barcelona kooxda Inter Milan oo marti ku aheyd garoonka Camp Nou.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag kooxaha Lille iyo Chelsea ee tartanka Champions League
Kooxaha Liverpool iyo Chelsea oo guulo gaaray & guud ahaan natoojooyinka kulamadii caawa laga ciyaaray Champions League… + SAWIRRO